ပြန်စမှာမဝသေးဘူး – Grab Love Story
သုခဝတီဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်ကို ပြေးမြင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သုခဝတီရပ်ကွက် လမ်းသွယ်အတွင်းရှိ တိုက်တစ်လုံးအတွင်းမှ ဆူညံသံများထွက်ပေါ်နေသည်။ သေချာနားစိုက်ထောင်မှ အသံသဲ့သဲ့သာကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆူညံသံများအဆုံးတွင် ခြံတံခါးဖွင့်၍ ကားတစ်စီး ထွက်ခွာသွားသည်။ိုဝရံတာမှ စူးစိုက်ကြည့်နေသော မှိန်ဖျော့ဖျော့ မျက်ဝန်းတစ်စုံမှ မျက်ရည်ပူများ တလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ မိဘနှစ်ပါး၏ရန်ပွဲအပြီး အိမ်မှထွက်ခွာသွားသူမှာ မေမေဒေါ် မေမီရှိန်ပဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ခေတ်ဆန်ဆန်နှင့် မည်သည့်အရာမှ အလေးမထားတတ်သော၊ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦး၏ သမီးပီပီ မောက်မာသော၊ မည်သူ့ကိုမှ အောက်ကျခံချင်စိတ်မရှိသောမေမေနှင့် စည်းစနစ်ကြီးပြီး ပညာမာနရှိသော ဖေဖေတို့၏ရန်ပွဲမှာ ထူးဆန်းသည်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ရောင်ဝါရှိန်လင်း သိတတ်စအချိန်ကတည်းက မေမေနှင့်ဖေဖေ၏ ရန်ပွဲများမှာ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်ပြီး ရန်ပွဲတစ်ခုလုံး မေမေ့အသံကသာ ဖုံးလွှမ်းနေတတ်သည်။ ရန်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့် အဘိုးအဘွားများနေထိုင်ရာ သုဝဏ္ဏရှိနေအိမ်သို့ သုံးလေးရက်ခန့်သွားနေတတ်ပြီး စိတ်ဆိုးပြေပါက သုခဝတီရှိနေအိမ်သို့ ပြန်လာတတ်ပါသည်။ အိမ်ပြန်လာသည့်အခါတိုင်း အမှားလုပ်မထားသည့်မျက်နှာနှင့် အလည်အပတ်ခရီးမှ ပြန်လာသည့် အိမ်ရှင်မတစ်ဦးကဲ့သို့သာ ပြုမူနေထိုင်တတ်သည်။ ဖေဖေဦးသန့်စင်လင်းနှင့် သားဖြစ်သူတို့ အိမ်ပြန်အလာကိုမျှော်လင့်နေသော်လည်း တပတ်ပြီးတပတ်ကုန်လွန်ခဲ့လေပြီ။ အချိန်တန်လျှင် အိမ်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ထားခဲ့သော်လည်း တစ်လကျော်ကျော်အချိန်အတွင်း ရောက်ရှိလာသည်ကား ဒေါ်မေမီရှိန်ဖက်မှ လက်မှတ်ထိုးထားသော ကွာရှင်းစာချုပ် တစ်စုံသာဖြစ်သည်။
ဒေါ်မေမီရှိန်၏ ရှေ့နေဖြစ်သူမှ ကွာရှင်းလိုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော စကားများကို ပြောနေသော်လည်း အကြောင်းအရာကြီးကြီးမားမားမရှိပဲရောက်ရှိလာသော ကွာရှင်းစာချုပ်အားကိုင်၍ နာကျည်းသောမျက်လုံးအစုံနှင့် မဲ့ပြုံးတစ်ချက်ဆင်မြန်းကာ ဦးသန့်စင်လင်း လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရောင်ဝါ၏ဘဝအတွင်း မိခင်ဖြစ်သူ၏ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုများ တခန်းရပ်သွားခဲ့သည်။ အမိမဲ့သားဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဖခင်၏ယုယကြင်နာမှု အဒေါ်ဖြစ်သူ ကြီးကြီးကြယ်စင်လင်း၏ မေတ္တာတို့ဖြင့် မတောင့်မတပဲ နေထိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရောင်ဝါ အထက်တန်းတက်သောနှစ်၌ ဒေါ်မေမီရှိန်၏ ဖခင်ဆုံးပါးသွားပြီး နိုင်ငံခြားသို့ထွက်သွားသည်ဆိုသော သီတင်းတစ်ခုသာ ကြားခဲ့ရသည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက် စစ်/ဆေးဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရာ အောင်မြင်သဖြင့် သင်တန်းတတ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တာဝန်ကျရာတပ်ရင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဖြင့် တပ်ရင်းရှိရာမြို့မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်မိခဲ့ကြသည်။ ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့်နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်သော ရောင်ဝါနှင့် မြို့မျက်နှာဖုံးဖြစ်သော မေသူဇာခင်တို့မှာ လူတိုင်းအားကျလောက်သည့် စုံတွဲများဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မေသူဇာခင်မှာ စစ်ဗိုလ်ဆရာဝန်ဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်ကိုသာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူမှန်း ပေါ်လွင်လာခဲ့သည်။ မိခင်ဖြစ်သူအပေါ်တွင် နာကြည်းချက်ရှိပြီး မိန်းမများအပေါ် အထင်ကြီးခြင်း မရှိသော ရောင်ဝါရှိန်လင်း အနေဖြင့် မေသူဇာခင်အပေါ် တဖြည်းဖြည်း အေးစက်လာခဲ့သည်။ တနေ့ မေသူဇာခင်တို့အိမ်တွင် ဆွမ်းကျွေးရှိသဖြင့် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရန် ရောင်ဝါရှိန်လင်းအား အကူညီတောင်းခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူးမှ ခွင့်ပြုသဖြင့် ညအိပ်သွားခဲ့ရာမှ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးခဲ့လေတော့သည်။
လူကြီးစုံရာနှင့် အမိဖမ်းလက်ထပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဗိုလ်ကတော်ဖြစ်ခွင့်ရရန် အသုံးချခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ရောင်ဝါရှိန်လင်းအနေဖြင့် အကျဉ်းချုံ့လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ပြီး သတို့သမီး၏အိမ်၌သာ မင်္ဂလာဦးညအားကျော်ဖြတ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ “မောင်” မေသူဇာခင်၏ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ခေါ်သံကြောင့် ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေသော ရောင်ဝါလှည့်၍ ကြည့်မိသွားခဲ့သည်။ ညဝတ်အင်္ကျီအပါးသားအောက်က ရုန်းကြွနေသော အလှတရားများ ပေါ်အောင်တမင်ဝတ်ဆင်ထားမှန်း သိသာထင်ရှင်းလှသည်။ ဖုထွက်နေသော အသားစိုင်များလှုပ်ခါအောင် တလှမ်းပြီးတလှမ်း လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ လမ်းလျှောက်လာသော မေသူဇာခင်ကိုကြည့်ပြီး ရောင်ဝါတစ်ယောက် စိတ်ပျက်မှုများခံစားနေရပါသည်။ ကုတင်ထက်သို့ထိုင်ပြီး ခပ်နွဲ့နွဲ့မှီကာ “မောင် ရေချိုးအဝတ်စားလဲလိုက်ပါ့လား။ စိတ်အပန်းပြေတာပေါ့” “အင်း” ရေချိုးလိုက်၍ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လန်းဆန်းသွားသော်လည်း စိတ်ပင်ပန်းမှုဒဏ်များမှာ လျော့ပါးသွားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ မေသူဇာခင်အပေါ် ချစ်ခင်တွယ်တာခဲ့မိသော စိတ်ခံစားချက်များ ကျန်ရှိနေခြင်း ရှိမရှိမသေချာခဲ့ပါ။ ညအိပ်မီးမှိန်မှိန်အောက်က ပုရိသတိုင်းစွဲမက်ဖွယ်အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော မေသူဇာခင်ကိုကြည့်ရင်း ပျံ့လွင့်နေသောအတွေးများနေရာတွင် ရမ္မက်စိတ်များ အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ “မောင် လာလေ” ခရာသံလား? ညုသံလား? မသဲကွဲသော အသံဖြင့် မေသူဇာခင်က ရောင်ဝါ့ကို ခေါ်လိုက်သည်။ “အင်း” မေသူဇာခင်၏ဘေးတွင် ဝင်ရောက်၍ ပက်လက်လှန်ကာလဲလျောင်းလိုက်ပြီးနောက် ရမ္မက်စိတ်များပြင်းထန်နေခဲ့သော်လည်း အတွေ့ကြုံမရှိသူ ပီပီ မည်သို့မည်ပုံ စတင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့သည်။ မေသူဇာခင်က ရောင်ဝါ၏ဖက်သို့ လှည့်လိုက်ပြီး လက်များကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ ရောင်ဝါ၏ ပခုံးဆီမှ ရင်ဘက်သို့ အစုန်အဆန်ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်သည်။
ပခုံး၊ရင်ဘက်နှင့် ဝမ်းဗိုက်များကို အစုန်အဆန်ပွတ်သပ်ပေးနေတော့ ရောင်ဝါ၏လီးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး တင်းမာလာသည်။ ပုဆိုးပေါ်မှနေ၍ ပေါင်များကိုပွတ်သပ်ပေးနေသော မေသူဇာခင်၏လက်နှင့် ရောင်ဝါ၏လီးတို့ ထိမိတိုင်း ပို၍ပို၍တင်းမာလာခဲ့သည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်ထိ် တုံ့ပြန်မှုမရှိသော ရောင်ဝါကြောင့် မေသူဇာခင် စိတ်ရှည်ခြင်းမရှိတော့ပဲ ရောင်ဝါ၏ပုဆိုးကို ဖြေလျော့ကာ လက်နုနုဖြင့် ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးနေခဲ့သည်။ “အူး” မိမိကိုယ်တိုင် ကွင်းတိုက်သော အရသာနှင့် မတူခြားနားသော အရသာသစ်ကြောင့် အမှတ်တမဲ့ ရောင်ဝါ ညည်းညူမိသည်။ ရောင်ဝါဦးဆောင်မှုအား စောင့်မျှော်နေပါက မင်္ဂလာဦးညအား အဆင်ပြေပြေ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်မှန်း ရိပ်မိသိရှိသွားသော မေသူဇာခင်မှ ရောင်ဝါ၏ ကိုယ်လုံးပေါ်ကို ခွလိုက်သည်။ ရောင်ဝါ၏ နှုတ်ခမ်းများကို မွတ်သိပ်စွာဖြင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း နမ်းရှုံလာခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်နမ်းရှိုက်နေစဉ် မေသူဇာခင်မှ ရောင်ဝါ၏လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ ဆွဲထူလိုက်ပြီး စွပ်ကျယ်အင်္ကျီအား ဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်။ သူမ၏ညဝတ်အင်္ကျီကိုလည်း ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီးနောက် ရောင့်ဝါအပေါ် ခွထိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းအစုံအား နမ်းရှိုက်လျှက်ရှိနေခဲ့သည်။ ရောင်ဝါ၏လက်များက အလိုအလျောက်ပင် မေသူဇာခင်၏ ခါးအားဖက်ပြီး ရမ္မက်စိတ်များနှင့် ပြန်လည်နမ်းရှိုက်နေမိခဲ့သည်။ ရုတ်တရက် ရောင်ဝါအား တွန်းလှဲလိုက်ပြီး အလျင်အမြန်ပင် အတွင်ခံ အဝတ်များကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် ရောင်ဝါ၏လီးနှင့် သူမ၏စောက်ပတ်တို့ကို ပွတ်တိုက်နေရင်း နို့များကလည်း ရင်ဘက်ကို မထိ,ထိအောင် ပွတ်တိုက်ပေးနေပြန်သည်။ ပက်လက်အနေအထားနှင့် မရိုးမယွဖြစ်လာသော ရောင်ဝါကလည်း အောက်မှနေ၍ ကော့ထိုးနေမိသည်။ “ခစ် ခစ် ခစ်” သူမ၏ ကျေနပ်ဖွယ် ရယ်သံလွင်လွင်နှင့်အတူ နားနားကပ်၍ “မောင် ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘူးလား”ဟု ပြောလာခဲ့သည်။
“အင်း ဟုတ်တယ် မနေနိုင်တော့ဘူး မေ့ကို အရမ်းလိုးချင်လာပြီ”ဟု ရောင်ဝါက ပြန်ပြောလိုက်သောအခါ မေသူဇာခင်က ရောင်ဝါ၏လီးကို လက်နှင့်ကိုင်ပြီး သူမ၏စောက်ပတ်အဝနှင့်တေ့ကာ တဖြေးဖြေးခြင်း ထိုင်ချလာခဲ့သည်။ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနှင့် စီးပိုင်နွေးထွေးကာ ဝင်ရောက်နေသောအရသာကြောင့် ရောင်ဝါ၏စိတ်များ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပဲ အောက်မှ ပင့်၍ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ဒုတ်ဆိုသော မြည်သံနှင့်အတူ “အား” “မောင်ရယ် သားအိမ်ကိုထိလိုက်တာ” “မကောင်းလို့လား မေ” “ကောင်းတာက ကောင်းပါတယ် နည်းနည်းအောင့်သွားလို့ပါ” အပေါ်မှ ဆောင့်ပေးနေသော သူမ၏သားအိမ်နှင့်ထိမိတိုင်း ရောင်ဝါအနေဖြင့် လီးထိပ်မှ တဆစ်ဆစ် ဝေဒနာတခုနှင့် မခံစားဖူးသေးသော အရသာတစ်ခု ခံစားနေရသည်။ ဖင်ကိုနှဲ့၍ စကောဝိုင်းလိုက်၊ အထက်အောက်ဆောင့်လိုက်နှင့် မမောနိုင်မပန်းနိုင် ဆောင့်နေရင်းက ” အ့ အ့” “အမေ့” နှုတ်ဖျားမှ ညီးညူရင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင့်လာခဲ့သည်။ “အား………” ညည်းသံရှည်တစ်ခုနှင့် စောက်ပတ်ဆီမှ ဆွဲညှစ်ပေးနေသည်ကို ခံစားရရင်း သူမ ရောင်ဝါ၏ ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ မှောက်ကျလာခဲ့သည်။ “မောင် မပြီးသေးဘူး မှတ်လား” “အင်း” “လာ အပေါ်ကနေ”ဟု ပြောပြီး သူမက ရောင်ဝါအပေါ်မှလှိမ့်ဆင်းလိုက်ပြီး ပက်လက်လှန် လိုက်သည်။ ရောင်ဝါလည်းသူမကို ခွလိုက်ပြီး အပေါ်မှနေ၍ ညောင့်နေသည်။ သူမက ရောင်ဝါ၏လီးကိုကိုင်ပြီး စောက်ပတ်အဝတွင်တေ့ပေးသည်။ ရောင်ဝါလည်း အထဲထိရောက်အောင် အဆုံးထိဆောင့်နေသည်။
တကိုယ်လုံးအားနှင့် ဆောင့်နေသော ရောင်ဝါကို မေသူဇာခင်က “မောင်ရေ တကိုယ်လုံးနဲ့မဆောင့်နဲ့ ခါးကိုပဲကစားပြီးဆောင့် ” “အင်း” သူမပြောသည့်အတိုင်း ခါးအားကိုအသုံပြုပြီး သွက်လက်စွာဆောင့်လိုက်သည်။ “အ့ အမေ့” လီးထိပ်နှင့်သားအိမ်တိုက်မိပြီး တထစ်ထစ်မြည်သံနှင့်အတူ လီးထိပ်ဆီမှ ကျဉ်လာပြီး သုတ်လွှတ်ချင်စိတ်များ ပြင်းထန်လာသည်။ “အား မောင်ပြီးချင်ပြီ” မြန်ဆန်စွာဖြင့် အချက်ရေ စိပ်စိပ်ဆောင့်ပေးအပြီး မေသူဇာခင်၏ စောက်ပတ်အတွင်း သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်လိုက်သည်။ မေသူဇာခင်က ရောင်ဝါ၏ခါးကို ခြေထောက်နှင့်ချိတ်ထားပြီး စောက်ပတ်အထဲမှ ဆွဲညှစ်နေသဖြင့် “အ့ မေ မေ” “အူး မောင် မရဘူး ကျဉ်နေပြီ” “ခစ်ခစ် ကောင်းတာပါ” “အိုး အိုး မေ တော်တော့ကွာ” “အင်းပါကွာ ချစ်လို့လုပ်ပေးနေတာကို မောင်အဆင်ပြေလား” “အင်း ပြေပါတယ်” “ခနနားလိုက်ဦး ပြီးမှ ပြန်စရအောင်” “ပြန်စမှာ စိတ်ချ မောင်မဝသေးဘူး” “ခစ် ခစ် ခစ်” “ဟား ဟား ဟား” ရယ်သံများ သံပြိုင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုညတညလုံး နှစ်ဦးသား မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဖြင့် အချစ်ရေယဉ်ကြောဝယ် ကူးခတ်နေမိခဲ့ကြလေတော့ည်။